Global Voices teny Malagasy » Ahoana koa ny manaraka ao Taiwan rehefa tafala tamin’ny latsabatom-panesorana ny Ben’ny Tanàna pro-Beijing? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 03 Jolay 2020 4:34 GMT 1	 · Mpanoratra Oiwan Lam Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Taiwan (ROC), Fifidianana, Mediam-bahoaka, Politika
Famoriam-bahoaka ho fanesorana amin'ny latsabato an'i Han Kuo-yu tamin'ny 5 jona 2020. Saripika avy amin'i We Care Kaohsiung
Tratran'ny latsabatom-panesorana  azy amin'ny maha-ben'ny tanànan'i Kaohsiung, tanàna faharoa lehibe indrindra ao Taiwan, ka miteraka fifampihenjanana vaovao indray amin'ny fifandraisana amin'i Shina ny politisiana iray eo am-pisandratana sady efa kandidà ho filoham-pirenena taloha izay mirona ho amin'ny fanatsarana bebe kokoa ny fifandraisana amin'i Beijing.
Ny latsabatom-panesorana an'i Han Kuo-yu no manamarika fa sambany nisy ben'ny tanàna voatsipy tamin'ity fomba iray ity mialoha ny hanaperany ny fehim-potoam-piasana.
Ny fomba nanalàna azy dia ny latsabatom-panesorana tamin'ny 6 jona izay nahitana mpifidy 939.090 mirona amin'ny fanesorana an'i Han ary 25.051 monja no manohitra izany.
Araka ny lalàna Taiwaney — nahitsy tamin'ny taona 2016  — mihoatra ny ampahaefatry ny mpifidy ao Kaohsiung izay mitotaly manodidina ny 2,3 tapitrisa no ilaina mandrotsaka ny vatom-panesorana ary tsy maintsy mihoatra ny isan'ny tsy manaiky izany mba hahatanteraka ny hetsika.
Han Kuoyu mamariparitra  ity fanentanana latsabatom-panesorana ity ho fanentanana fanaratsiana olona manerana ny firenena ataon'ny Antoko Demaokratika Liam-Pandrosoana (DPP) mitondra amin'izao fotoana, nanana ny kandidàny Tsai Ing-wen nandresy an'i Han tamin'ny fifidianana ho filoham-pirenena tamin'ny janoary.
Fisandratana sy fidarabohan'ny sakaizan'i Shina
Tamin'ny taona 2018 i Han no nandresy tamin'ny fifidianana Ben'ny tanànan'i Kaohsiung nahazo vato 892.545. Ity tanàna miorina any atsimo dia dia noheverina ho “maitso lalina” — roapolo taona nialoha ny nifidianana an'i Han ny mponina ao amin'ity tanàna ity no nirona hatrany tany amin'ny Antoko Demaokratika Liam-Pandrosoana izay mpanohana ny fahaleovantena.
Vondrona politika kely maromaro ny nitarika ny fanentanana latsabatom-panesorana. We Care Kaohsiung , iray amin'ireo vondron'olompirenena nanao fanentanana, izao niampanga an'i Han ho nanadino ny mponin'i Kaohsiung tsy nanatanteraka ny fampanantenany hamaha ny olan'ny tanàna fa nihazakazaka kosa ny hirotsaka ho filoham-pirenena.
Ny paika ara-politikan'i Han  dia miompana manontolo amin'ny firoboroboana ara-toekarena ary hitany fa ny fifanatonana ara-toekarena sy ara-politika amin'i Shina no hany lala-tokana mankany amin'izany tanjona izany.
Tamin'ny taona 2018, ny tigetram-pifidianany dia hoe “Entambarotra mivoaka. Olona miditra. Olona maro miditra ao Kaohsiung no miteraka tombombarotra goavana” (貨出得去，人進得來，高雄發大財). Ny tanjona dia ny hampitomboana ny fanondranana entana mankany Shina sy misintona mpizahatany bebe kokoa avy any amin'ny Tanibe.
Saingy tsy nety nivelatra ny toekaren'i Kaohsiung noho ny nanokanany ny heriny tany amin'ny fifidianana ho Filoha tamin'ity taona 2020 ity, izay niteraka fivakisan'ny lazany tao an-toerana.
Ny teny tigetra tamin'ny fifidianana manerana ny firenena dia hoe “Filaminana ho an'i Taiwan. Vola ho an'ny Vahoaka”（台灣安全 人民有錢), izay mampiditra fa miankina amin'ny fifandraisany amin'i Shina ny filaminam-pirenena sy ny firoboroboan'i Taiwan.
Tsy nahapetraka ny marika ny fanentanana ary niezinezina ny fandresen'i  Tsai Ing-wen.
Ny faharesen'i Han na eo amin'ny sehatra nasionaly na eo amin'ny sehatra ao an-toerana no manondro ny fetran'ny sehatra pro-Beijing ao anatin'izao toedraharaha ao Taiwan izao.
Ampangain'ny vondrona mpanohana ny fahaleovantena ho tohanan'ny Antoko Komonista Shinoa i Han. Nanohana ampahabemaso ny Marimaritra Iraisana tamin'ny taona 1992 , fifanarahana nosoniavin'ny antoko Kuomingtang nitondra tamin'izany fotoana izany sy i Shina, izay manana fotokevitra hoe “Shina iray fa samy manana ny fijeriny” i Han.
Tamin'ny Janoary 2019, anefa, nandeha lavidavitra kokoa ny mpitarika shinoa Xi Jinping, nampiditra tosika  hampanao sonia an'i Taiwan amin'ilay “Firenena Iray Rafitra Roa” mitovy fotokevitra amin'ny momba an'i Hong Kong.
Saingy naharesy lahatra  ny Taiwaney maro ny korontana tao — nopihan'ny ezak'i Shina hivoy an'ilay volavolan-dalàna fandroahana ho any Shina tamin'ny alalan'ny vaomieran'ny fanaovandalana ao Hong Kong — fa tsy araka izay namariparitana azy ny “Firenena Iray Rafitra Roa”.
Chen Yichi avy ao amin'ny Antoko Fananganam-Panjakana an'i Taiwan, antoko mpanohana ny fahaleovantenan'i Taiwan izay anisan'ny mpandray anjara mavitrika tamin'ny fanentanana fandatsahambato fanesorana, nankalaza  ny fahombiazan'ny fanentanana tao amin'ny Facebook.
Ny hafatra iraisampirenena ambadika fahombiazan'ny latsabatom-panesorana an'i Han Kuoyu dia ny nilazan'ny vahoakan'i Taiwan hoe Tsia amin'i Shina, nahasakodiavatra an'i Xi Jinping ary fanehoa-panohanana an'i Hong Kong… Mila matotra isika ary mihetsika amin'ny fanoherana ny fitsofohan'ny mpitsikilon'ny AKS etoTaiwan.
Krizy politika ao amin'ny antoko mitondra taloha
Niteraka fahavakivakisana goavana ho an'ny KMT izay nahita ity politisiana manana foto-pisainana tia mihary harena ity ho mpanavotra (一人救全黨) ka avy amin'izany no nahazoany olona manodidina azy  ny fandresena miezinezina azon'ny vato ho fanesorana an'i Han.
Hung Hsiu-chu, anisan'ny mpitarika ao amin'ny KMT nanome akony  ny tsikeran'i Han amin'ny latsabato ary namely ny DPP antoko mitondra ho nanohana ny fanentanana.
Mifanohitra amin'ny fotokevitra ny demaokrasia ny vato fanesorana an'i Han satria tsy nanaraka ny fotokevitra tsy fitongilanan'ny fitondram-pitantanana ny antoko mitondra. Nanetsika ireo sehatra fampitam-baovao maitso io ho fanaratsiana an'i Han. Mihorongorona ambonin'ny demaokrasia amin'ny anaran'ny demaokrasia io ary mamorona fankahalana sy fampisaraham-bazana. Naeliny manerana an'i Taiwan ny voan'ny tsy rariny, tsy ara-drariny ary ny tsi-fahamarinan-toerana… raha tsy jerena ny vokatra, dia tsy misy ny mandresy ary fanafintohinan'ny demaokrasia izay resy daholo ny rehetra amin'izy ity. Fihemorana mahamenatra amin'ny fivoarana demaokratika eto Taiwan izy ity.
Saingy nanana fomba fandraisana azy amin'ny fomba hafa ny Filohan'ny KMT amin'izao fotoana, Johnny Chiang, naneho  fanajana ny safidin'ny mpandrotsa-bato ary miala tsiny amin'ny mponin'i Kaohsiung noho ny tsy nahavitan'ny antoko nameno ny nantenain-dry zareo.
Nilaza mialoha ny isian'ny krizy ao anatin'i KMT izany efa nahatratra taonjato iray izao i,Alex Payette, mpandalina mifantoka manokana amin'ny politikan'i Shina, antoko nitondra tsy nisy mpanohitra mandra-pahazoan'ny DPP ny fandresena tamin'ny fifidianana filohampirenena  voalohany tamin'ny marsa 2000.
Nanapika krizy anatiny tao amin'ny #KMT  #國民黨  faharesen'ny #韓國瑜  an'i #HanKuoyu  tamin'ny 6 jona.Mety hahita antoko vaovao hipoitra isika eto #Taiwan  #台灣  atsangan'ny singa liam-pandrosoana kokoa ao amin'ny Antoko Nasionalista satria mbola miandry antoko anelanelany ny sangany ara-toekarena Taiwaney
Etsy andaniny, misy ireo mpaneho hevitra sasantsasany mitsinjo mialoha  fa hiditra amin'ny fomba maherivaika kokoa i Beijing hitsofohany raha manapa-kevitra ny handao ny fotokevitra “Shina Iray” notazoniny hatry ny elaela ny KMT.
Amin'ny 12 septambra raha ela indrindra i Kaohsiung hifidy ben'ny tanàna vaovao. Mety hirotsaka hofidiana  amin'izany ny Filoha lefitra an'i DDP, Chen Chi-mai, raha mbola handroso kandidà iray na sehatra iray ny KMT.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2020/07/03/148426/
 nahitsy tamin'ny taona 2016: https://focustaiwan.tw/politics/201611290018
 paika ara-politikan'i Han: https://globalvoices.org/2020/01/02/taiwan-january-2020-presidential-elections-who-are-the-contenders/
 niezinezina ny fandresen'i: https://globalvoices.org/2020/01/21/tsai-ing-wen-taiwan-presidential-elections/
 Nanohana ampahabemaso ny Marimaritra Iraisana tamin'ny taona 1992: https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/taiwan-opposition-candidate-han-kuo-yu-calls-for-return-to-one-china-formula
 nampiditra tosika: https://globalvoices.org/2019/01/05/chinas-push-for-one-country-two-systems-in-taiwan-meets-vigorous-opposition/
 naharesy lahatra: https://globalvoices.org/2020/01/10/the-impact-of-hong-kong-protests-factor-on-taiwans-presidential-election-and-cross-strait-relations/
 nahazoany olona manodidina azy: https://udn.com/news/story/120934/4576382
 ny fandresena tamin'ny fifidianana filohampirenena: https://en.wikipedia.org/wiki/2000_Taiwanese_presidential_election
 mitsinjo mialoha: https://matters.news/@XiaoFan/%E7%BD%A2%E9%9F%A9%E6%88%90%E5%8A%9F%E4%B9%8B%E5%90%8E-%E4%B8%A4%E5%B2%B8%E6%B3%A2%E4%BA%91%E8%AF%A1%E8%B0%B2%E7%9A%84%E6%9C%AA%E6%9D%A5-bafyreigsykjzmjtlhsnwwyeimtvgqalxq4cnjjwy6wu2iuytswj2swmpgq
 Mety hirotsaka hofidiana: https://focustaiwan.tw/politics/202006070001